#Breaking News Addi Bilisa Baasaa Tigiraay (TPLF) miseensota isaa,..Salphina Col Abiy Ahmed – Kichuu
HomeAfaan OromooVideos#Breaking News Addi Bilisa Baasaa Tigiraay (TPLF) miseensota isaa,..Salphina Col Abiy Ahmed
#Breaking_News Addi Bilisa Baasaa Tigiraay (TPLF) miseensota isaa, muudama siyaasaa mootummaa
Federaalaatti sadarkaa gara garaa irra turan, itti-gaafatamummaa isaanii gadhiisanii akka bahan ajajuu miseensi
Koree Hojii-raawwachiistuu TPLF Obbo, Getaachoo Raddaa himan yaa.
Salphina Col Abiy Ahmed
Oborraa global network was live.
May 15 · Media #OBN isanii irratti Aferani akkantii dhirtii dhugaa itti himaa jirtii //caqasa #share walif godha
Paartiin #Bixiginaa or #Badhadhin Biyya bulchu hin danda’u maalif
Jawwee ummannii Oromoo hundii amantii isaatiin siif kadhachaa jira. Kabaja guddaadhan mana hidhaa sana keessaa baata. Bilisummaa ummata kees ija keetiin argita.Free all political prisoners in Ethiopia 2020
ወላይታ ወደ እርምጃ ገብቷል❗ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ የህዝብን ከቤት አትውጣ ትእዛዝ ጥሶ የሄደ መኪና እርምጃ ተወስዶበታል‼ Ummani Walaayta sirna nama nyaata nafxanyaa kolonel Abiyotin nurrati deebi,a jiru hin fudhanu jechuudhan mormii isaani bifa boonsa tahe kanan dhageesifacha jiru !
ODUU Hatattama Mumme Duranii Abiy Ahmed fi daniel kibret Kokke wal qaba jirachu kuno
OMN:ODUU IJOO (Onk 05, 2020)
Godina Arsii Aanaa Doddotaa Magaalaa dheeraa keessatti namoota ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhamanii turan keessaa Dargaggoonni sadi mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii yaala dhabuudhaan lubbuun isaanii akka darbite jiraataan magaalaa dheeraa tokko bilbilaan OMN’tti himee jira.
Dargaggoonni gargaarsa yaalaa dhabuudhaan Lubbuun isaanii mana hidhaa keessatti darbite kunneen, Abdallaa Ahmed, Sayyoo Hajjii fi kan sadaffaa ammoo ammaaf maqaa isaa kan nu hin dhaqqabne tokko akka tahan maddi keenya Magaalaa Dheeraa irraa gabaasee jira. .
Mana hidhaa kana keessatti Namoonni hedduun dhibbootaan lakkawaman iddoo tokkotti walitti qabamuun baatii lamaa oliif dararamaa jiraachuu kan ibsan maddeen, hanga ammaattii tajaajila hidhamaan tokko argachuu qabu dhabuudhaan dhibee fi miidhaalee gara garaatiif saaxilamaa jiran jechuun dubbatan.
Hidhamtoonni kunneen hanga har’aati mana murtiittis akka hin dhihaatin namni bilbilaan odeeffanne kun ibseera. Miseensa Poolisii Oromiyaa kan tahe inspeektar Quufaa Nuutolee sababa nammoonni irreechaa irraa dhoowwamanii hidhamanii turan gad haa dhiifaman jedhee mormeef qofa gaafa onkoloolessa 3/2020 magaalaa Adaamaa keessatti Poolisii federaalaatiin akka ajeefame hiriyyaa isaa keessaa namni tokko bilbilaan OMN ‘tti hime. Inspeekter Quufaa Nuutolee nama sabboonaa fi nama quuqama sabaa qabudha. Bara kana mootummaan akka ummanni irreecha hin deemne gaafa ugguru namni kun adda durummaan falmaa akka tures hiriyaan isaa ibseera.
Maddi kun itti dabaluun, Ilma isaa kan tahe dargaggoo Guutamaa Quufaa Nuutolee Sababa mormii ajeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee Godina Arsii Magaalaa Goljaa keessaa Humnoota Mootummaatiin butamee mana hidhaa magaalaa Asallaa keessatti dararamaa akka jiru nuuf eeruun, Awwaalcha Abbaa isaa irrattis akka hin argamne dhoowamee jiras jedha.
Sirni Awwaalcha Inspeektar Quufaa Nuutolee gara iddoo dhaloota isa fudhatamuun Godina Arsii Aanaa xiyyoo magaalaaa Goljaatti guyyaa kaleessaa raawwatamuu namni bilbilaan dubbifne kun ibsee jira.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Haromaayaatti namni tokko Rasaasaa loltoota mootummaatin ajjeefamuun dhagahame. Namni loltoota Mootummaatiin ajjeefame kun Abdi Nuuroo kan jedhamu yoo tahu, Abbaa ilmaan shanii fi qotee bulaa tahuu jiraattota naannichaa keessaa namni bilbilaan dubbifne OMN’tti himee jira.
Akka namni yaada isaa laate kun jedhutti, namni sun osoo hin ajjeefamin guyyaa lamaan dura sababa wal-gahirraa maaf hafte jedhuun qabanii harka duubattii hidhuun erga fidaniin booda naannichatti hokkorri uumame. Sana booda waraanni mootummaa halkan walakkaa mana jireenya isaa dhaqanii haadha warraa isaa gafatanii yero dhaban,gama Oyruu isaa qajeeluun Osoo inni Maasii jimaa isaa kessaa taa’aa jiruu rasaasa itti bananuun ajjeesuu jiraataan dubbifne kun addeesseera.
Shiftaa ajjefnee koottaa reefka fudhadhaa jechuun maatitti qoosaa akka turanis maddi keenya ibseera.
Sirni awwalcha abbaa maati kanaatis guyyaa arraa Onkololeessaa 5/2020 achuma Aanaa Haromaayaattii raawwatameeti jira.
Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabarat, Ganda Qarree Doobbii jedhamuun beekamu keessatti, hidhaa, reebicha fi saamichi Waraana Mootummaatiin Ummata irratti raawwatamaa jira jechuun jiraattonni komii qaban bilbilaan OMN’tti himan. Ganda Baadiyyaa Qarree Doobbii jedhamu kana keessatti, torbaan kana bifa adda ta’een hidhaan hammaachuun, Qonnaan bultoonni lakkofsaan hedduminna qaban Mana Barumsaa tokko keessatti hidhamuun dararamaa akka jiran Manguddoon tokko kan hidhamanii turan haala achitti raawwatamaa jiru OMN’f ibsaniiru. Dabalataan waraana Shanee barbaadaa sababa jedhuun bakka itti hidhamnee jirruu nu baasanii hurufa keessa nu joorsisaa ooluun boqonnaa nu dhoowwaa jiran jechuun dubbatu jiraataan odeeffanne kun. Dubartoonni Abbaa warraa isaanii jalaa hidhamef waytii nyaata geessuuf dhaqanitti humnoota kanaan doorsifamuun haamileen jaraa akka miidhamu taasifamaa jiraachuunis ibsameera.
Aangon Mootummaa bilxiginnaa Xumuramee jira jedhan Qeerroon Shawaa lixaa Aanaa Calliyaa irraa yaada isaanii OMN’iif kennan. Mootummaan kun yeroo isaa ykn beekkamti biyya bulchuuf qabu fixatee jira kan jedhan Qeerroowwan kunneen, Ummannis ta’ee Mootummaan akkasuma Paartileen Mormitootaa, humni waraanaas ta’ee lammiin biyya kanaa hundinuu Seera biyyattii kabachiisuu dirqama qabu jedhan.
Aangoon Mootummaa kanaa xumurame kan jedhan qeerroon Calliyaa, fedha murna tokkoo, ykn paartii mormituu osoo hin taane Heeraa biyyattiitu hayyama waan ta’eef Hogganoota Siyaasaa Mana hidhaa keessatti balleessa tokko malee dararamaa jiranis hiikuun dirqamadha jedhan.
Murni masaraa jiru Seeraa fi Heera cabsee dirqamaan biyya bulchuu hin danda’u, kanaaf osoo dhiigni tokko hin dhangala’in akka Heeraa fi Seerri biyyatti jedhutti Aangoo gadi lakkisuu qaba jechuun akeekkachiisan.
Biyyattiin gara Gaaga’amaatti deemaa jirti waan ta’eef qaamni Seeraa fi Heeraa cabsee aangoo irratti hafe dirqama Aangoo gadi lakkisuu qaba,Jedhu Qeerroowwan OMN bilbilaan dubbise.
Sirni Awwaalcha poolisii Inspector Quufaa Nuutolee Adaamatti Makkalaakayaan ajjeefame har’a bakka dhalootaa Godina Arsii Aanaa Xiyyootti raawwatameera. Makkalaakayaan poolisii Oromiyaa waan tuuffataniif bakkayyuutti ajjeesanii darbu. Uleedhaan tumu. Ilmaan Oromoo bakkayyuu jiran sirna Nafxanyaa kanaan nyaatamaa jiru. Filannoon keenya tokko waan harkaa qabnuun of kabachiisudha!
Red Terror of Mengistu H/Mariam of the 70th is Replicating in Oromia Now!!